बालबालिकामा पियर प्रेसर - पेरेन्टिङ - नारी
बालबालिकामा पियर प्रेसर
फाल्गुन ५, २०७१
बालबालिकाले जिद्दी गर्नु स्वाभाविक हो तर साथीभाइको कुनै सामान देखेर त्यस्तै सामान प्राप्त गर्ने हठ गर्नुलाई पियर प्रेसर भनिन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार पियर प्रेसर एउटा यस्तो दबाब हो, जुन कुनै पनि उमेरका बालबालिकामा देख्न वा अनुभव गर्न सकिन्छ । कम उमेरका बालबालिका चाँडै यसको शिकार हुन्छन् । पहिलो पटक स्कुल जाने बालबालिका चाँडै नै आफ्ना साथीहरूको कुरामा फस्छन् । यही उमेरमा उनीहरू पूर्णरूपले आफ्ना साथीजस्तै देखिने चाहना राख्छन् । अभिभावकका लागि यस्तो दबाब कुनै चुनौतीभन्दा कम हुँदैन ।
पियर प्रेसर कति उचित
मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार पियर प्रेसरको बोझमुनि दबिनु कुनै पनि प्रकारले राम्रो होइन । यसबाट बालबालिकाको प्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । कारण यो उमेरमा उनीहरूमा के राम्रो-नराम्रो भन्ने ज्ञान हुँदैन ।
पियर प्रेसरबाट टाढा कसरी राख्ने
साना बालबालिकालाई पियर प्रेसरबाट टाढा राख्न केही कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
प्राइमरी स्कुलसम्मका बालबालिका क्षणमै रिसाउने, क्षणमै खुसी हुने हुन्छन् । तिनलाई सम्झाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो- प्रेम । बालबालिकाले आफ्नो साथीको ठूलो कार देखेर ठीक त्यस्तै कार माग्छन् भने उनीहरूको मागलाई कुनै बहाना बनाएर टार्नुभन्दा उनीहरूको परिवार ठूलो छ तर परिवार हाम्रो सानो छ, त्यसैले आफूसँग सानो कार छ भनेर बुझाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
आफ्ना सरसामानको सम्मान गर्ने
बालबालिका जुन वातावरणमा रहन्छन्, उनीहरू त्यस्तै अनुकरण गर्छन् । अत: अञ्जानमै पनि आफ्नो कुनै आफन्त वा साथीका सामु आफ्नो घर, कार वा अन्य कुराका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन । यसबाट बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
असुरक्षाको भावनालाई अन्त्य गर्ने
कतिपय बालबालिका आफ्नो शान्त स्वभावका कारण आफूलाई अरूभन्दा कमजोर महसुस गर्छन् । यसका कारण स्कुल जान मन नपराउने, साथीहरूसित खेल्न नरुचाउने हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा गाली गर्नुको साटो उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । उनीहरूलाई साहस र बहादुरीका कथा सुनाउनुपर्छ र कथाको हिरोसित उनीहरूको तुलना गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको मनोबल बढ्छ । पढाइमा उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ । यसबाट बालबालिका घरमा मात्र होइन घरबाहिर पनि आत्मविश्वासी हुन्छन् ।
खतरनाक हुनसक्छ पियर प्रेसर
स-साना हठसम्म त ठीकै हुन्छ, तर बिस्तारै पियर प्रेसरले बालबालिकाको जीवन खराब गर्न सक्छ । उनीहरूको जिद्दीपनलाई वास्ता गर्न छोडे वा हरेक जिद्दीलाई पूरा गरे बालबालिका त्यसको फाइदा उठाएर नराम्रा बानी-व्यवहारको शिकार हुन थाल्छन् । स्कुल बंक गर्ने कुरा पनि आउँछ । पछि बिस्तारै झूटो बोल्ने, अभिभावकका कुरा नसुनेझैं गर्ने, वास्ता नगर्ने वा धूम्रपान-मद्यपानजस्ता लतको शिकार समेत हुन सक्छन् । अत: समयमै बालबालिकाप्रति ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ र उनीहरूलाई कुनै पनि दबाबमा आउन नदिने प्रयास गर्नुपर्छ ।
के भन्छन् विशेषज्ञ ?
- आफ्ना बालबालिकाका साथीहरूका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ ।
- बालबालिकालाई राम्रो-नराम्रोको फरक बुझाउनुपर्छ ।
- आफ्ना सरसामानको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ ।
- प्राइमरी स्कुलसम्म बढीभन्दा बढी समय दिनुपर्छ ।
- बालबालिकाको हरेक दिनको दिनचर्या सोध्नुपर्छ । उनीहरूलाई आफूले नसोधी सबै कुरा सेयर गर्ने बनाउनुपर्छ ।
- कहिल्यै उनीहरूको तुलना अरूसित गर्नु हुँदैन ।
- अन्य बालबालिकाका सामु आफ्ना बालबालिकाको नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्नुहुँदैन ।
- बालबालिकाका सामु सधैं एउटा राम्रो परिवारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाले दु:ख दिए हटाउने उपाय श्रावण २, २०७५
होमवर्कको झन्झटबाट कसरी बच्ने ? जेष्ठ २४, २०७५
बालबालिकाहरूलाई होमवर्क गराउँदा जेष्ठ १६, २०७५